Codsiga ugu weyn ee magnesium oxysulfide aan dabka lahayn guddi waa in la soo saaro xoogaa dahaar ah guddis.
Magnesium oxysulfide panel insulation fire (oo sida caadiga ah loo yaqaan godka magnesium oxysulfide godan) waa shey udub dhexaad u ah guddiyada nadiifinta birta midabka. Waxay ka samaysan tahay magnesium sulfate, magnesium oxide iyo agab kale, oo la dahaadhay oo la qaabeeyey oo la bogsiiyey. Waa nooc cagaaran, bay'ad ahaan u habboon nooc cusub oo isdaahirinta ah iyo badeecada ilaalinta kulaylka. Marka la barbardhigo noocyada kale ee alaabada birta ah ee midabka birta ah, waxay leedahay faa'iidooyinka dab -damiska, biyuhu, ka -hortagga kuleylka, iska -caabbinta dabacsanaanta, dahaarka kuleylka, dahaarka dhawaaqa, miisaanka iftiinka, iyo muuqaalka hagaagsan, kaas oo ka kooban cilladaha qaar alaabta asaasiga ah ee saxan ee suuqa, sida ： Awood, foorarsiga foorarsiga, awoodda dhalista, saamaynta ilaalinta kulaylka, gaar ahaan ku habboon qaar ka mid ah darbiyada kala -qaybinta gudaha iyo dibaddaba iyo saqafyada la laalay ee gobollada gaarka ah.
Astaamaha wax -qabadka ee magnesium oxysulfide panel fireproof
1, adkaanta hawada
Gudiga oksulfide ee Magnesium wuu ka duwan yahay sibidhka Portland ee caadiga ah marka la dejinayo iyo habka daaweynta. Waa shay sibidh leh oo hawo adkaynaya oo aan ku adkayn biyaha.
2, qaybo badan
Magnesium oxysulfide panel waa qaybo badan, iyo budada hal-qayb ee budada iftiinka gubanaysa asal ahaan ma laha wax xoog ah ka dib markay ku adkaato biyaha. Qaybaha ugu muhiimsan waa budada la shiday oo fudud iyo magnesium sulfate, qaybaha kale waxaa ka mid ah biyaha, wax-ka-beddelayaasha iyo buuxiyeyaasha.
3, khafiif ah oo aan daxalka u lahayn birta
Magnesium oxysulfide panel wuxuu u adeegsadaa magnesium sulfate sidii wakiil isku dhafan. Marka la barbar dhigo magnesium oxychloride panel fireproof, guddi magnesium oxysulfide kuma jirto ion koloriin oo uma nuglaato birta. Sidaa darteed, guddiga oxysulfide magnesium wuxuu beddeli karaa sibidhka magnesium oxychloride waxaana loo adeegsadaa albaabbada dab -demiska iyo bannaanka. Xagga guddi -ka -daboolidda derbiga, yaree halista ay keento daxalka birta ee ions chloride.
4, xoog sare
Awoodda isku -darka ah ee guddiga oxysulfide magnesium wuxuu gaari karaa 60MPa iyo xoogga dabacsanaantu wuxuu gaari karaa 9MPa kadib wax -ka -beddelka.
5, xasiloonida hawada iyo iska caabinta cimilada
Magnesium oxysulfide panel waa shay sibidhis ah oo hawo-adkeeya, kaas oo sii wadi kara isku-uruurinta iyo adkaynta hawada oo keliya, taas oo siinaysa xasillooni hawo oo wanaagsan. Ka dib marka la helo bogsashada magnesium oxysulfide, qalajinta hawada deegaanka, ayaa sii xasilloon. Tijaabooyinku waxay muujinayaan in hawo qallalan, xoogga isku -darka iyo iska -caabbinta dab -damiska ee magnesium oxysulfide alaabada guddiga dab -damiska ay ku kordhaan da'da, welina ay sii kordhayaan ilaa labada da 'aadna u xasilloon yihiin.
6. Xummad hoose iyo daxalka oo hooseeya
Qiimaha pH ee sifeynta qallafsan ee guduudka magnesium oxysulfide wuxuu u dhexeeyaa inta u dhexeysa 8 iyo 9.5, kaas oo u dhow dhexdhexaad, aadna wuu u jajaban yahay dhalada galaaska iyo fiber alwaax. Qof kastaa wuu ogyahay in alaabooyinka GRC lagu xoojiyo fiber galaas, iyo alaabta dhirta-fiber-ka waxaa lagu xoojiyaa sida balka, xiirashada qoryaha, cawska suufka, bagasse, daboolka lawska, buunshaha bariiska, budada wadnaha galleyda iyo qashinka kale ee ka samaysan alwaaxa ma aha alkali u adkaysta. Maaddooyinka ayaa aad uga baqaya daxalka alkali. Waxay ku waayi doonaan xoog ka hooseeya daxalka alkali sare waxayna lumin doonaan saameyntooda xoojinta alaabada sibidhka. Sidaa darteed, sibidhka caadiga ah laguma xoojin karo fiber galaas iyo fiber alwaax sababtoo ah alkali sare. Dhinaca kale, sibidhka magnesium wuxuu leeyahay faa'iidooyin alkaliin ah oo u gaar ah wuxuuna muujiyey xirfadihiisa dhinaca GRC iyo wax soo saarka fiber -ka dhirta.
7, culays fudud iyo cufnaanta hooseysa
Cufnaanta maadada magnesium oxysulfide guud ahaan waa 70% oo kaliya ee badeecada sibidhka Portland ee caadiga ah. Cufnaanta badeecadeeda guud ahaan waa 1600 ~ 1800㎏/m³, halka cufnaanta alaabta sibidhku guud ahaan tahay 2400 ~ 2500㎏/m³. Sidaa darteed, waxay leedahay cufnaan hoose oo aad u muuqata.
Hore: Gacan -gacmeed godan MgO guddi qolka nadiifta ah
Xiga: Gypsum dhagaxa dhogorta dhagaxa nadiif ah
Nidaamka Gudiga Xakamaynta Dabka
Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Qolka Nadiifka ah, Daaqadda Qolka nadiifka ah,